Iiroyals Kunye Nosapho Lwasebukhosini | January 2022
INkosana uHarry kunye noMeghan Markle Ukuphucula iCottingham Cottage yeNdlu 1 eKensington Palace
INkosana uHarry kunye noMeghan Markle ngoku bahlala eKensington Palace ebukekayo iNottingham Cottage enobungakanani obufanelekileyo kwesi sibini- ke banokuphucula baye kwigumbi elikhulu 1 ngezizathu emva komtshato wabo wasebukhosini?
Iphi iNtetho kaKumkanikazi ye-2019 efihliweyo? Intetho yeKrisimesi yeQueens
INtetho yeKumkanikazi ye-2019 yoSuku lweKrisimesi yasasazwa ngo-3: 00 ngomhla weKrisimesi (nge-25 kaDisemba) kwaye yafota kwigumbi lokuzoba eliluhlaza eWindsor castle.
Inqaba kaMey, iKhaya lokugqibela likaMama uKumkanikazi, ukuKhangela abaGadi
Inqaba yaseMey kwii-Highlands zaseScotland, ikhaya langaphambili lika-Queen Mother ongasekhoyo kunye nendawo apho iNkosana uCharles ihambela khona rhoqo, ifuna igadi.
Hlala kwi-Crown's 19th Century Estate kwiiScotland Highlands
Abathandi beCrown banokuhlala kwindawo entle ye-dverikie ye-19th ye-gothic estate, ebonakala kumdlalo wasebukhosini njengendawo yokuhlala kweKumkanikazi eBalmoral.
Ikhaya likaPrincess Diana loBuntwana, iAlthorp House, eNorthamptonshire ivulelwa uLuntu kweli Hlotyana
Ikhaya lasekhaya likaPrincess Diana, iAlthorp House kwiSithili saseDaventry, eNorthamptonshire, liza kuvula iingcango zalo kuluntu kwakhona ehlotyeni ukusuka nge-1 kaJulayi ukuya kwi-31 Agasti.
Iipropathi ezili-10 ezithengiswayo ezinxibelelana nosapho lwasebukhosini
Ngothotho lwesine lomqhele ngoku osasaza iNetflix, uKnight Frank uqokelele uluhlu lwezindlu ezithengiswayo ezinamakhonkco kwisahlulo sasebukhosini.
Iintyatyambo zoMtshato wasebukhosini: Indlela iPrincess Eugenie noJack Brooksbank ethelekiswa ngayo neNkosana uHarry kunye noMeghan Markle
UPrincess Eugenie waseYork noJack Brooksbank bakhethe umboniso weentyatyambo wasekwindla nguRob Van Helden kumtshato wabo wasebukhosini xa kuthelekiswa neNkosana uHarry kunye noMeghan Markle ababonisa izimbali ezimhlophe ezenziwe ngumyili uPhilippa Craddock.
Ngaphakathi kwigumbi lokuzoba eliluhlaza laseWindsor castle- eHarry, Meghan, Archie
Igumbi lokuzoba eliluhlaza laseWindsor castle lalingemva kwemifanekiso yobhaptizo luka-Archie kunye neefoto zomtshato wasebukhosini ezisemthethweni zeNkosana uHarry kunye noMeghan Markle.
I-Royal Family ityhila ukulungiswa kweNdlu yaseBuckingham
Intsapho yasebukhosini isinike umbono wasemva kwesakhiwo seBuckingham Palace se-369 yezigidi zeeprojekthi zokuhlaziya kunye nevidiyo emfutshane.
Ii-1920s zokuzingela indawo yokuhlala ziyathengiswa eBurton Lazars, Leicestershire
I-Grange, indawo enqabileyo yangaphambili ye-1920s yokuzingela ehlala kwilali yaseLeicestershire yaseBurton Lazars, ngoku iyafumaneka ukuze ithengwe nge- $ 1.9 yezigidi.
Ngaphakathi kwigumbi lokuzoba elimhlophe laseWindsor castle apho iifoto zomtshato kaPrincess Eugenie zathathwa khona
Igumbi lokuDweba eliMhlophe laseWindsor Castle yayisisimo sePrincess Eugenie kunye neefoto zomtshato wasebukhosini zikaJack Brooksbank. Igumbi lasebukhosini, elichaphazeleke ngumlilo weWindsor castle e1992, kulapho ukumkanikazi ahlala khona ebambe iindibano ezincinci kwaye zivulelekile ukuba zingandwendwelwa. Thatha ukhenketho kwiHomebeautiful.com/uk.
Ukumkanikazi kunye nosapho lwasebukhosini batyhila izityalo ezizithandayo
Ukumkanikazi kunye namanye amalungu osapho lwasebukhosini baveza izityalo kunye neentyatyambo abazithandayo ngeli xesha lonyaka, ngokusekwe kwiigadi zabo.
Ikhaya leNkosana uHarry kunye noMeghan Markle-Ngaba uHarry noMeghan baya kuhlala phi nosana lwabo lwasebukhosini?
INkosana uHarry kunye noMeghan Markle, iDuke kunye neDuchess yaseSussex, baqala ubomi bomtshato eNottingham Cottage kodwa ukuthetha ngendlu enkulu eseKensington Palace kukhuthazwe ziindaba zokuba esi sibini silindele umntwana wabo wokuqala kunye. Zithini izinto abanokukhetha kuzo xa kuziwa apho baya kukhulisa khona umntwana wabo wasebukhosini kunyaka olandelayo?
Umtshato wasebukhosini-UHarry wakhetha intyatyambo eyintandokazi kaDiana kwisithsaba somtshato kaMeghan
INkosana uHarry, iNkosana yaseSussex, ikhethe iintyatyambo zomfazi wayo, uMeghan Markle, iiduchess zaseSussex zomtshato osuka kwigadi yabo yabucala yaseKensington Palace.
isicatshulwa esifutshane ngobuhle
Ikhadi lekrisimesi libonisa umbono